आइतबार​, असार १९ २०७९ ०५:०५ PM
मङ्गलबार १२ साउन २०७८ ०८:५१ PM
वित्त नीति र मौद्रिक नीतिजस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था र मौद्रिक नीतिको प्रयोगको सम्बन्ध नङ र मासुजस्तै हुन्छ । वित्तीय संस्थाहरू सक्रिय र सुशासित नभएसम्म मौद्रिक नीतिले परिलक्षित गरेका उद्देश्य पूरा गर्न कठिन हुन्छ ।
निजी क्षेत्रः राजनीतिक संकटमा तैं चुप मै चुप
सोमबार ११ साउन २०७८ १०:१३ AM
नेपालमा राजनीतिक दलपिच्छेजस्तो निजी क्षेत्रका संस्थाहरू गठन गरिएका छन् । निजी क्षेत्रको छाता संस्था भनेर चिनिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा त नेतृत्व चयन यो वा त्यो दलको भनेर छनोट गरिन्छ । राजनीतिक दलहरूले पनि अघोषित रूपमा आफ्ना समर्थकमार्फत संस्थाको नेतृत्व कब्जा गर्ने प्रयास गर्छन् ।
नेपालमा प्राइभेट इक्विटी र भेञ्चर क्यापिटलको सम्भावना -डा. मनिष थापाकाे विचार
बिहीबार ७ साउन २०७८ ११:५९ AM
हाल विश्वभर विशिष्टीकृत कोषहरूमार्फत ७० खर्ब (७ ट्रिलियन) डलरभन्दा बढी रकम बराबरको कोष व्यवस्थापन भएको अनुमान छ । गुगल, फेसबुक, अमेजन, टेस्लाजस्ता विश्वव्यापी ठूला कम्पनीहरू प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल फन्डको पुँजी लगानीकै सहारामा स्थापित भएका हुन् ।
नेपाल एयरलाइन्समा कर्मचारीलाई दोष दिएर व्यवस्थापन भाग्न मिल्दैन
बिहीबार ७ साउन २०७८ ०८:२२ AM
कर्मचारीको आन्दोलन धेरै अगाडि बढिसकेको छ । अव कर्मचारीहरू पछि हट्ने अवस्था छैन । त्यसका लागि सयुक्त ट्रेड युनियनको मूल एजेन्डा भनेकै महाप्रवन्धक पौडेलको राजीनामा र प्रवन्धपत्र फिर्ता हो ।
बुधबार ६ साउन २०७८ ०४:३१ PM
‘सरकारको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता भनेको प्रत्येक नेपालीलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउनु हो । अहिलेसम्मको स्थिति हेर्ने हो भने हामीलाई साढे ५ करोड डोज खोप आवश्यक पर्छ । जसमध्ये केवल डेढ करोड डोज खोप आयात गर्न सकिनेसम्मको बन्दोबस्त देखिन्छ । अहिलेसम्म ६८ लाख डोज खोप आयात भएको छ ।
भिजिट नेपालमा पूर्वाधार बढाउन लिएको ऋणमा कोभिड थपियो, मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरोस्
आइतबार​ ३ साउन २०७८ ०४:०९ PM
गत वर्षको मौद्रिक नीतिले व्यवसायीहरूलाई राहत दिलाएको थियो । यो पटकको मौद्रिक नीतिले पनि कोभिडबाट थला परेको व्यवसायीहरूलाई राहत पाउने आशा राखेका छन् ।
कस्तो हुनुपर्छ मेक इन नेपालको उद्देश्य ? उद्योगी शशिकान्त अग्रवालको सुझाव
बिहीबार ३१ असार २०७८ ११:१४ AM
सीएनआईको एकल प्रयासले मात्रै मेक इन नेपाल अभियान पूरा हुन सक्दैन् । यो अभियानमा निजी क्षेत्र र सरकार एकैसाथ एकै ठाउँमा हुनुपर्छ । तब मात्रै मेक इन नेपाल वास्तविकतामा परिणत हुन्छ ।
नयाँ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन र करका दरमा हेरफेर गर्न सक्छ-रामेश्वर खनाल
सोमबार २८ असार २०७८ ०७:२४ PM
नयाँ बजेट ल्याउन अधिकार भएको अवस्थामा अर्काले ल्याएको बजेट कसले संसदबाट पास गर्छ ? बजेट परिमार्जन भएर आउँछ भन्ने सवाल नै भएन । पूरै नयाँ बजेट नै आउनेछ ।
बैंकको पुँजी वृद्धि गर्ने समय होइन, व्यवसाय उठाउने बेला हो
शुक्रबार​ २५ असार २०७८ ०१:३३ PM
पुँजी वृद्धि योजना आफैमा राम्रो हो । तर, अहिलेको विषम परिस्थितको पनि ख्याल गर्नुपर्छ । बैंकहरुले आफैंले स्वनियमन गरेर पुँजी बढाउँदै लिएर गए राम्रो हो । अब यति पुँजी हाल उति पुँजी हाल भनेर दबाब दिनुु हुँदैन ।
यसरी बढ्यो माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको समय र लागत
बिहीबार २४ असार २०७८ ०९:०७ AM
मौद्रिक नीतिमा स्प्रेड दर तोक्नु हुँदैन, खुला छाड्नुपर्छ
बुधबार २३ असार २०७८ ०२:५१ PM
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १०० वर्ष: सामारिक र आर्थिक रुपमा महाशक्ति राष्ट्र बन्दै चीन
बिहीबार १७ असार २०७८ ०१:३१ PM
साना व्यवसायीलाई परेको समस्या र महाप्रसाद अधिकारीको दोस्रो मौद्रिक नीति
आइतबार​ १३ असार २०७८ ११:४३ AM
शुक्रबार​ ११ असार २०७८ ०९:४६ AM